ISUPERSEPTEMBA LUYA KUKHETHA OKUQHELEKILEYO KUNYE NESIPHUMO ESIPHAKAMILEYO
USeptemba umele ixesha lokuvuna, isivuno esitsha seetamati sele sivuniwe, kwaye sele siza kungena ngoSeptemba omkhulu. Siza kubonelela ngezaphulelo ezinkulu kubathengi abatsha nabadala. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ukufumana iinkcukacha ezingaphezulu! Ifowuni / Whatsapp / Wechat: +86 158 3391 1611
Wamkelekile kwigumbi lethu lokuhlala elifanelekileyo leCanton
Sele kuyiveki okoko kwavulwa i-129th Canton Fair, kwaye zonke izinto zethu zixakeke kakhulu kusasazo ngqo. Zonke ziyintengiso entle kunye neyobungcali. Kusasazo ngqo, siza kwazisa ngokweenkcukacha iinkcukacha zemveliso. Ukuba ufutshane ngexesha, unokujonga kwakhona ukuphindaphinda ividiyo. W ...
2021 iGoodood eDubai
Saye kwi-Gulfood 2021, wamkelekile ukuba usityelele kunyaka olandelayo! Ixesha: Feb. 21- 25, 2021 Idilesi: Iziko lezoRhwebo leDubai, PO Box 9292 Dubai, UAE
ngomphathi ku 20-05-08
Utamatisi uncamathisele Xa sisenza iitumato ezityumkileyo zibe yincasa eshinyeneyo kunye nokufana okuxineneyo, le fomu yaziwa njenge-tomato paste. Singayisebenzisa le ncamati yetumato kwiintlobo ezahlukeneyo zokutya kunye neeresiphi ezahlukeneyo ngokunjalo. Oku kunika incasa yokwenyani ngegumbo, isuphu, isityu, imbiza egcadiweyo njlnjl.
U-Hebei Tomato wahlenga-hlengisa eyona misebenzi mihle yokwakha iqela lonyaka ukusukela nge-9 ukuya kwi-13 ka-Agasti ka-2019. unfo ...
I-Hebei Tomato Ishishini Co., Ltd. isungulwe ukusukela ngo-2007 e-Hebei, e-China, utyalo-mali iyonke yi-US $ 3.75 yezigidi, ezizodwa ekuqhubekeni kwazo zonke iintlobo ze Catato Tomato Caste kunye ne Sachet Tomato Cola.